1। योहोम्बाइन ट्री-इतिहास
2। विवरण - Yohimbine एचसीएल के हो?
3। Yohimbine के लिए प्रयोग गरिन्छ?
4। योहोम्बेनबाट स्वास्थ्य लाभ पाउनुहोस्
5। योहोम्बिन सँगै अन्य यौगिकहरू सँगै
6। मैले कसरी यहाम्बेन लिनुपर्छ?
7। योहोम्बेन लिने सम्भावित खतराहरू
8। Yohimbine प्रयोगकर्ता समीक्षाएँ
9। यहाम्बेन बिक्रीको लागि पूरक
एक उत्पादनको लागि उपचारमा पाँच-तारा समीक्षाहरू छन् रोग र एक वजन घटाने को पूरक को रूप मा, तपाईं योहोम्बाइन मा भरोसा गर्न सक्छन्। यस लेखमा हामी तपाईंलाई बताउछौओहेम्बिन फाइदाहरू, योहोम्बेन समीक्षाहरू, यहाम्बेन डोजज, योहोम्बेनले यो असामान्य सहायक औषधिको सन्दर्भमा सबै अन्य आवश्यक जानकारीहरू प्रयोग गर्दछ।
योहोम्बिनको इतिहास पश्चिम अफ्रिकाबाट उठ्छ, जहाँ यो एक परम्परागत एफ्रोडसिअसको रूपमा प्रयोग भएको थियो जसले यौन प्रदर्शनमा सुधार गर्यो। यद्यपि मूल निवासी युहाइबको छाल धेरै तरिकामा प्रयोग गर्थे, यसको प्राथमिक उपयोग पुरुषमा असक्षमता रहेको थियो। प्राकृतिक उपचार उपचारको रूपमा प्रयोग भएको थियो जहाँ योहाम्बे छाल कुचल गरिनेछ र अन्य जडी बूटियों संग एक शक्तिशाली संयंत्र उपाय को रूप मा मिश्रित। यो "प्रेम पेटी" को रूपमा पनि चिनिन्थ्यो।
विवरण - Yohimbine एचसीएल के हो?
Yohimbine (146-48-5) एक आकर्षक आहार पूरक हो जसले धेरै सम्भावित फाइदाहरू छन् जहाँ यसले एक स्वस्थ वजनको साथसाथै यौन जीवनशैली बढाउन मद्दत गर्दछ। विराग भन्दा लामो अलमारियों मा भएको भए तापनि, यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं यसलाई पूरा गर्नु अघि पूरै पूरै बारेमा सबै जानकारी जम्मा गर्नुहुन्छ। तपाईंको लागि भाग्यशाली, यस लेखले तपाइँलाई जान्न आवश्यक सबै विवरणहरू प्रदान गर्दछ। Ipamorelin लाभ र इम्पोरेलिन प्रयोग मा मार्गदर्शन
आज, योहिम्बाइनले औषधीको रूपमा एक योग्य ठाउँ फेला पारे जुन डिसफन्क्शनको उपचारको लागि प्रयोग गरिन्छ। यद्यपि अधिकांश सन्देहकर्मीहरूले यो कामोत्तेजक मध्ये एकको रूपमा राख्छन्, वैज्ञानिक अध्ययनहरूले प्रमाण दिन्छ कि योहिमबाइन हाइड्रोक्लोराइड (योहिम्बाइन एचसीएल) एक हो।
डाक्टरहरुले योहोम्बेन को मान्य रूपहरु लाई उनको यौन जीवन मा थोडा सहयोग को आवश्यक रोगियों को वर्णन गर्दछ। आधुनिक उत्पादनमा सक्रिय सामग्रीहरू छन् जुन सदाबहार योहाइबे रूखको छालबाट निकालिन्छ। एक नुस्खा औषधको रूपमा, यसलाई सामान्यतया भनिन्छ yohimbine हाइड्रोक्लोराइड (CAS 65-19-0) र एउटा क्षारीय भनिन्छ। तपाईं पनि Yohimbine ट्याब्लेट र क्याप्सूल फारममा फेला पार्न सक्नुहुन्छ र 98% शुद्ध पाउडरको रूपमा बेचिन्छ। योहिम्बाइन डिसफंक्शनको उपचार गर्ने र वजन घटाउन सहयोग पुर्‍याउन यसको क्षमतामा बिक्री गरिन्छ।
यहाइब बार्कमा सक्रिय संघीयताले अल्फा-एक्सएनएक्सएक्स एड्रेनेर्जिक रिसेप्टरहरूलाई ब्लक गर्ने विश्वास गरेको छ जुन कारबाही रोक्न मद्दत गर्दछ। यसले गर्दा नाइट्रिक एसिडको रिहाई बढाउँछ जसले रक्त वाहिकाहरू घटेको कारणले यौन अंगमा पुग्ने रगत बढाउँछ।
यो पनि एक राम्रो वसा जलने को कम्पाउंड पनि छ विशेष रूप देखि जिद्दी वसा को नष्ट गर्न को लागि। उत्पादनको छोटो अवधि भित्र वजनको हानिमा सहायता गर्न प्रयोग गरिन्छ। हर्बल पूरकले शरीरमा एड्रेनालाईन स्तर बढाउँछ। यसले नियामक प्रक्रियाको विरुद्ध काम गर्दछ जसले मोटो जलिरहेको छ।
Yohimbine के लिए प्रयोग गरिन्छ?
Erectile Dysfunction को उपचार गर्न को लागी
असफल सेक्स ड्राइभले एक व्यक्तिले आफ्नो आत्मसम्मान गुमाउन सक्छ यसैले उसको जीवनको गुणस्तरलाई असर गर्दछ। धेरै कारणहरूले प्रम्प्ट गरिएको, यो अवस्थाले विश्वव्यापी धेरै पुरुषहरूलाई असर गर्दछ। यस अवस्थाबाट पीडित व्यक्तिहरूको ठूलो संख्या स्किमरहरूको जालमा पर्दछ जसले तिनीहरूलाई मात्र फाँसी दिन्छ वा परिस्थिति बिगार्छ। जहाँसम्म, आज त्यहाँ एक प्राकृतिक उपचार छ जसले तिनीहरूलाई आराम गर्न सजिलो बनाउँदछ किनकि यो सुरक्षित मात्र छैन तर प्रभावकारी पनि छ। प्रायः स्वास्थ्य खाद्य स्टोरले Yohimbe बार्क एक्स्ट्रक्टलाई एक कार्यशील कामोद्दीपकको रूपमा बढावा दिन्छ जसले सेक्स ड्राइव र डिसफंक्शनको उपायलाई बढावा दिन्छ।
वजन घटाने को प्रोत्साहन दिन्छ
के तपाईं दस वर्ष अघि सकेसम्म चाँडै हिड्न सक्नुहुन्छ? तपाईं केही समय अघि नै उही गतिसँग चलाउनुहुन्छ? यदि तपाईंको प्रतिक्रिया होइन भने, तपाईंले सम्भवतः केहि वजन प्राप्त गर्नुभएको छ। जब तपाईं प्रशिक्षित गर्न र दाहिने खाना खाने प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ योहोम्बिन परिणामहरू राम्रो हुन साबित हुन सक्छ। यो जिममा तपाईंको समय बिताउन वा मृत्युको निम्ति आफूलाई भोक लगाउनु भन्दा अतिरिक्त वजन छुटकारा पाउन एक उत्कृष्ट तरिका हो। योहोम्बेन एचसीएल (एक्सएनएक्सएक्स- एक्सएनएक्स-एक्सएनएक्सएक्स) एक हासिल गर्न र एक स्वस्थ वजन कोयम राख्न मद्दत गर्न सक्छ। यो प्राकृतिक वजन घटाने पूरक अल्फा-2 एड्रेनर्जिक रिसेप्टरहरू छन् जसले मोटो कोशिकाहरूमा भेट्टाउँछ। यो फ्याँकिएको वसा र वजनको कमी बढ्छ। जब पहिले वा व्यायामको बेला खपत भयो यसले वसा ब्रेकडाउन बढाउँछ। यसले पनि भूख र भूख दमन गर्दछ र फलस्वरूप, खाना खपतको स्तर कम गर्छ। योहोम्बेइन एक स्वस्थ आहार को एक भाग को रूप मा वजन कम कार्यक्रमहरुमा शामिल छ र अधिक कुशल प्रभाव को लागि व्यायाम दिनचर्या।
वजन गुमाउनुको फाइदा भनेको हो कि यसले तपाईको उपस्थितिलाई मात्र सुधार गर्दैन, तर तपाइँले तपाईंलाई उच्च अवस्थामा कोलेस्ट्रोल, निद्रा एपनिया, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय रोग र धेरै अधिक अवस्थाहरूबाट रोक्छ। एकपटक तपाईंले योहोम्बेन लिनु भएपछि, तपाईं अब तपाईंको स्वस्थ र फिटर संस्करणको भ्रमण सुरु गर्नुहुन्छ।
यहाम्बेनबाट स्वास्थ्य लाभ पाउनुहोस्
अयोग्य रोग उपचार गर्दछ
पुरुषहरू जसलाई डिसफन्क्सन हुन्छ उनीहरूको यौन जीवनमा कठिन समय हुन्छ - यद्यपि योहिम्बेले निकाल्ने काम यो अंगको रगतको यौन अंगलाई बढावा दिँदै। यसले डिसफंक्शनका लक्षणहरूलाई कम गर्न मद्दत गर्दछ, कसैको उर्वरता बढाउँछ र यौन ड्राइभलाई बढाउँदछ। त्यसोभए, यदि तपाईं आफ्नो यौन जीवनमा समस्याहरू अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ भने, तब योहिमबाइन तपाईंको लागि उत्तम समाधान हुन सक्छ। जे होस् पुरुषहरूले सामान्यतया फार्मास्यूटिकल कामोद्दीपक प्रयोग गर्छन्, कम कामेच्छाको स्तर भएका महिलाहरूले पनि यसको प्रयोगबाट लाभ लिन सक्दछन्।
रक्त परिसंचरण बढाउँछ
यदि तपाईंको रक्त परिसंचरण प्रणाली ढिलो हुन्छ भने, तपाइँ सम्भवतः ढिलो उपचार दरहरू, कम ऊर्जा स्तरहरू, र संज्ञानात्मक बादलमय सामना गर्नुपर्दछ। यस्तो अवस्थामा यदि तपाईंलाई सम्भवतः एक वादाईटरलाई आवश्यक छ। योहोम्बी एकदम सही vasodilator हो किनकि यो प्राकृतिक छ तर यसको पनि लाभकारी छ। यसले रक्त वाहिकाहरू विस्तार गर्दछ जसले बारीमा रगतको प्रवाह बढाउँछ जसले आवश्यक पोषक तत्व र ओक्सीजन सबै अंग र कक्षहरूमा वितरण गर्दछ। तपाईलाई आवश्यक छ तपाईंको भर्खरको योहोम्बाइन तपाइँको हर्बल पूरकमा तपाइँको उपचार, सिग्नल सुधार गर्न र आफ्नो ऊर्जा स्तर सुधार गर्न को लागी।
जब रक्त वाहिकाहरू मा तनाव कम हुन्छ, तपाईंको हृदय रोग स्वास्थ्य राम्रो हुन्छ। यदि तपाईंको रगत वाहिकाहरू तंग र बखत हुन्छन् भने, यसको मतलब यो हो कि तपाईंको हृदयले रक्तको माध्यमबाट रक्त पम्प गर्न सक्दछ जुन रक्तचाप बढ्न सक्छ। यो अवस्था अन्ततः स्ट्रोकको नेतृत्व गर्न सक्छ, रक्त वाहिकाहरू र हृदयको आक्रमण रोक्न सक्छ। जब तपाइँ आफ्नो आहारमा योहोम्बेन जोड्नु हुन्छ भने, तपाइँ कोरोनरी हृदय रोग को संभावनाहरु लाई कम गर्न सकिन्छ।
योहोम्बीको अर्को मूल्यवान उपयोग यसको असरमा हुन्छ जब यसले वजन गुमाउँछ। यदि तपाईं काम गर्दै हुनुहुन्छ र अझै पनि वजन गुमाउन सक्षम भएमा आफ्नो शरीरमा केहि एड्रेनेन्डेन्सेप्टरहरूलाई रोक्न तपाईको सफल वजन घटानेको समाधान हुन सक्छ। को प्रयोग Yohimbine पूरै नोरपाइनफाइनको उच्च स्तरको लागि अनुमति दिन्छ जसले वसा गतिशीलतालाई रोक्न र शरीरमा फैट ब्रेकडाउनलाई निम्त्याउँछ।
एथलेटिक प्रदर्शनमा सुधार गर्छ
वजन घटाने मा मदद को शीर्ष मा, यहाम्बी मा मांसपेशियों को मांस मा बढ्छ र थकान को भावना को कम गर्दछ। यसले तपाईंको ऊर्जा स्तरको प्रवर्धन गरी ऊर्जा को मात्रा बढाउन मद्दत गर्दछ।
अवसाद राहत गर्दछ
डोपामिन हार्मोन हो जसले मानव मस्तिष्कलाई सक्रिय र कुशल राख्न मद्दत गर्दछ। जब डोपामिनिको स्तर कम छ थकान थोरै अनुभव गर्नुपर्दछ, मूड स्विंग र अन्तिम अवस्थामा डिप्रेसन हुन्छ। योहोम्बिनले विशेष गुणहरू समावेश गर्दछ जुन डोपामिन स्तर बढ्न जान्छ जसले गर्दा दुर्व्यवहारको भावना घटाउँछ।
सुक्खा मुहार व्यवहार गर्दछ
योहामिबीले लवको प्रवाह बढाउँछ। यदि तपाइँ औषधि लिइरहनुभएको छ भने तपाईंको मुख सुकेको हुन सक्छ, तब योहोम्बेनले तपाईंलाई शर्तसँग सम्झौता गर्न मद्दत गर्नेछ। सूखे मुख वा किर्गोस्टोमिया एक परिस्थिति हो जसको कारणले गर्दा तपाईंको मुख गीला राख्नु भनेको साईनल इफेक्टको साइड इफेक्ट हो।
यसले रक्त क्लटिंग घटाउँछ
अत्यधिक रक्त क्लटिंग परिणामले दिलको आक्रमण, गुर्देको विफलता र स्ट्रोकमा परिणाम हुन सक्छ। अध्ययनले निष्कर्ष निकालेको छ कि योहोम्बिनले रक्त क्लटिंगलाई कम गर्न सक्छ जहाँ यो केही एड्रेनेटोप्टरहरू ब्लक गर्दछ र एपिनेफेरेर कन्वरमा पनि नोरेपाइनफाइनलमा परिवर्तन गर्दछ।
यसले चिन्ता र डर कम गर्छ
चिन्ता विकारसँग व्यवहार गर्दा एकदम काम हुन सक्छ। डरको बलियो महसुस गरिरहेको बेला पनि कुनै खतराको अनुपस्थितिले गर्दा असहज महसुस गर्छ र तपाईंको जीवनको सबैभन्दा डरलाग्दो क्षण हुन सक्छ। यस बिन्दुमा, तपाईलाई कसरी थाहा छैन कसरी यो सम्झौता गर्दा तपाईले गरेको कुनै पनि प्रयास अघि पनि अवस्था भन्दा पहिले भन्दा खराब हुन नतिजा हुन सक्छ। योहोम्बेइन पूरकले फाबियासमाथि विजय हासिल गरेको छ र प्रभावकारी ढंगले आतंक हमला गर्छ। यो यो norepinephrine स्तर बढ्दै छ। यो एक पल्ट भएपछि, तपाईंको मूड बढेको छ, र चिन्ता र डरलाग्दो अचानक भावना तपाईंको जीवनमा कुनै स्थान छैन।
यसले2मधुमेह टाइप गर्दछ
यो कुनै रहस्य छैन कि मधुमेह अब संसारको मानिसहरूलाई असर गर्ने सबैभन्दा प्रचलित अवस्था मध्ये एक हो। योहाम्बेन फाइदामध्ये एउटा यो रक्तचापको ग्लूकोज घट्छ र इन्सुलिन स्तर बढ्छ। यो स्वाभाविक रूपले2मधुमेहको उपचार गर्ने एक राम्रो तरिका हो, र अध्ययनले देखाउँछ कि यो अवस्थाको उपचारमा निर्धारित दबाइको रूपमा प्रभावकारी छ। अझ राम्रो यहाम्बेन वजन घटाने प्रभाव मा रक्त शर्करा स्तर मा सुधार गर्दछ यस प्रकार2मधुमेह को खाडी मा राखन।
Itसंज्ञानात्मक कार्यसम्पादन सुधार गर्न सक्छ
कहिलेकाँही, तपाई आफैलाई एक परिस्थितिमा पत्ता लगाउन सक्नुहुनेछ जसले राम्रो सोचको आवश्यकता पर्दछ। सम्भवतः एक परियोजनामा ​​काम गर्ने धेरै सोच चाहिन्छ, कडा परीक्षाको लागि अध्ययन गर्दै वा जब तपाइँ भर्खरै केहि नयाँ सिक्ने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ। कुनै पनि थोरै कार्यले केहि अतिरिक्त फोकस र खुफियाको आवश्यकता पर्दछ, र योहोहोइन एचएलसी कहाँ हुन्छ काममा अध्ययनले देखाएको छ कि योहोम्बाइनले तपाईंलाई स्मार्ट र तपाईंको मस्तिष्कलाई अझ कुशलतापूर्वक काम गर्न दिन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं कुनै पनि संज्ञानात्मक कार्यहरू गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको मस्तिष्क नसुनाउन मल्टीट्यास्क गर्न सक्नुहुनेछ।
यसले तपाईंको मेमोरीमा सुधार गर्दछ
के तपाईंले विगतमा बिर्सनुभएको छ कि तपाइँ आफ्नो मेमोरीमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ? तपाईं जान्दछन् कि तपाईंको मेमोरी कम छ जब तपाईं स्पष्ट सामानमा बिर्सनुभयो जहाँ तपाईँले आफ्नो कुञ्जी राख्नुभयो वा प्रश्नको जवाफ दिनुहुन्छ कि तपाईले भर्खरको लागि परिमार्जित गर्नुभयो। कडा रूपमा देखा पर्न सक्छ, तपाईं आफ्नो मेमोरीमा सुधार गर्न सक्नुहुन्छ र बिर्सनु भएकोमा कम गर्न सक्नुहुन्छ। योहाम्बेन को प्रयोग भनेको तपाईंको मेमोरीमा सुधार गर्न मद्दत हो। यो यो norepinephrine स्तर बढ्दै छ। यसको निरन्तर प्रयोगको साथ, तपाई सधैँ तपाइँको मेमोरीको सबै भन्दा बाहिरबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र तपाइँलाई आवश्यक जानकारीको लगभग प्रत्येक खण्ड याद गर्न सक्नुहुन्छ।
यसले गुर्देलाई सुरक्षित गर्दछ
बच्चाहरु शरीर मा एक धेरै महत्वपूर्ण अंग हो कि अपशिष्ट, यानी विषाक्त पदार्थहरु, नमक, अतिरिक्त पानी को फिल्टर र यसलाई छुटकारा दि्छ। यदि कचरा बाँधिएको थियो भने, यसले हाम्रो शरीरलाई नकारात्मक असर पार्छ। बच्चाहरु लाई रक्तचाप को स्तर र रक्त अम्लता पनि नियंत्रित गर्दछ। गुर्देको रोग बढ्दै जान्छ यो अंग को हेरविचार गर्न राम्रो छ। रोगीहरूको लागि Yohimbine ले, यो सूजन को कम गर्न र कसरि गुर्दे को कार्यहरु लाई सुधार साबित गरेको छ। तपाईं योहोम्बेन पनि लिन सक्नुहुनेछ र तपाईंको गुर्देको काम गर्ने क्षमतामा सुधार गर्न सक्नुहुनेछ।
यो गठिया को उपचार मा मदद गर्न सक्छ
यद्यपि धेरै मानिसहरूले यो उमेरको सामान्य भागको रूपमा लिन्छन्, गठिया धेरै असुविधाजनक हुनसक्छ र धेरै नै दुखाइ हुन सक्छ। यद्यपी यो अवस्था संग निपटने र निराशाजनक लक्षणहरू यो निराश हुन सक्छ, तपाईं असहाय हुनुहुन्न। योहोम्बेनले संयुक्त सूजन कम गर्दछ जबकि एकै समयमा यो संयुक्त क्षति रोक्छ र एन्टिओक्सिडन्ट स्तर बढ्छ। योहोम्बेइन प्रभावले तपाईंको साथीहरू राखेर तपाईंलाई सामान्य जीवन बिताउन मद्दत पुर्याउन सक्छ।
यो दुखाइ कम गर्न प्रयोग हुन सक्छ
हाम्रो कुनै पनि क्षणमा दुखाइ हुन सक्छ। यो बीमारी, दुर्घटना वा चोट मार्फत हुन सक्छ। धेरै सकारात्मक योहोम्बेनको समीक्षा हो कि मान्छेले दिएका छन्, यिनी मध्ये एक को पीडा को कम गर्न को क्षमता हो। यदि तपाईंलाई दबाइ को कम गर्न को लागी एक प्राकृतिक तरिका मा सिंथेटिक दबाइ या डाक्टर को देख्न को लागी रुचि राखछन, तब योहोम्बेन जाने रास्ता हो।
यसले क्लोनिडाइन ओभरडोजको साथ मद्दत गर्न सक्छ
क्लोनिडिन एक उच्च रक्तचाप, निकासी लक्षणहरू (धूम्रपान, ओयोयोइड, र रक्सीबाट), चिन्ताको विकार र एडीएचडीबाट उपचारमा एक ड्रग हो। एक पटक अधिवेशन पछि यो विलम्ब, चक्करपना, र दुलहीपन हुन सक्छ। तपाईंको डराउनको लागी कुनै आवश्यकता छैन; योहोम्बेनले त्यो संभाल गर्नेछ।
योहोम्बिन सँगै अन्य यौगिहरु सँगै
नोलोक्सोनसँग संयोजनमा, यसले PCOS लाई उपचार गर्न मद्दत गर्दछ
PCOS सँग निदाई एकदम चुनौती हुन सक्छ। धेरै पीडादायी लक्षणहरूबाट गर्भ गर्न प्रयास गर्दा कठिनाई गर्दा, शर्तले तपाईंलाई सँधै राम्रो लाग्न सक्छ। किनभने हार्मोनल परिवर्तनले यसको कारणले गर्दा हरेक महिलाले यसको सामना गर्दथ्यो। सौभाग्य देखि, योहोम्बेन (एक्सएनएक्सएक्स- एक्सएनएक्स-एक्सएनएक्सएक्स) पोलिकोस्टिक अंडा सिंड्रोमले गर्दा अवांछित लक्षणहरू मेटाउन वा कम गर्न सक्दछ। र यस शर्तबाट अन्य स्वास्थ्य अवस्थाहरू जस्तै endometrial क्यान्सर र हृदय रोग संग जोडिएको छ, छिटो तपाईं Yohimbine लिन, तपाईं आफैलाई अन्य जटिलताबाट रोक्न छिटो।
बर्बेरिनको साथमा, सेप्सेको कारणले गर्दा अंगको क्षतिलाई रोक्छ
Sepisis एक स्वास्थ्य अवस्था हो जहाँ शरीर एक संक्रमण मा प्रतिक्रिया दिइन्छ जब ऊतकहरु लाई हानिकारक हुन्छ। Berberine र Yohimbine (65-19-0) हानिकारक एकाधिक अंगबाट प्रतिरक्षा कोशिकाहरु (न्यूट्रोफिल) लाई रोक्न र भ्रामक दूत अणुहरु लाई पनि कम गर्दछ।
मैले कसरी यहाम्बेन लिनुपर्छ?
शरीरमा रहेका अन्य सबै सामानहरू जस्तै, यो ध्यान दिनुहोस् कि अति धेरै खुराकहरू तपाईंको स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो छैन। यो महत्वपूर्ण छ कि तपाईं सही थाहा छ योहोम्बेन खुराक तिम्रो लागि। परम्परागत रूपमा, योहिम्बे रूखको बोक्रा उमालेर पियाएर प्राप्त गरेको पेय पिएर प्रयोग गरिन्छ। अन्य अवस्थाहरूमा, बार्क कुचिएको थियो र पाउडरको रूपमा प्रयोग गरियो। यद्यपि, आज योहिम्बाइन क्याप्सूल फारममा उपलब्ध छन् जुन धेरै सुविधाजनक छ। योहिम्बाइन फ्याट बर्नका लागि सिफारिस गरिएको खुराक 20mg हो जुन राम्रो प्रभावको लागि दुई दैनिक खुराकमा विभाजन गरिन्छ। डिसफंक्शनका लागि, प्रति दिन 42mg जति लिनु पर्छ।
पूरै योहोम्बेन भनिन्छ धेरै अधिक प्रभावकारी हुन्छ जब यो पहिले वा खाना खाने बेलामा यसले सम्भावित शरीरमा इन्सुलिन स्तरलाई महत्त्वपूर्ण वृद्धि गर्न सक्छ। सावधानी लिइन्छ किनभने विभिन्न ब्रांडहरूमा यहाम्बेको फरक मात्रा समावेश छ। यो 45 मिनेटको लागी अवशोषित गर्न नजिक हुन्छ र सेक्स गर्नु अघि3घण्टा प्रयोग गर्नु पर्छ।
Yohimbine कसले लिन सक्दैन?
यो पूरक लिनु अघि तपाईंले आफैलाई सोध्नुपर्छ, के योहोम्बाइन तपाईंको लागि सुरक्षित छ? विभिन्न कारणहरूले तपाईलाई यो औषधी लिन उपयुक्त छैन, र यसमा समावेश छ;
हृदय रोगको इतिहास
कम वा उच्च रक्तचाप
मानसिक स्वास्थ्य अवस्थाहरू
अर्को कुरा हो जुन तपाईं यस पूरकको लागि उपयुक्त हुने गर्नुहुन्न गर्भवती छ। यदि तपाईं यस पूरकमा हुनुहुन्छ र गर्भ गर्न योजना बनाउनुहुन्छ, तपाईले डाक्टरको सल्लाह खोज्नु पर्छ। अठारह वर्षको उमेर भन्दा कम उमेरको कुनै व्यक्ति योहोम्बेनको प्रयोगबाट बृहत गर्न आग्रह गरिएको छ।
योहोम्बेन लिने सम्भावित खतराहरू
योहोम्बिन उत्पादनहरू गलत लेबलको कारण सम्भावित जोखिमको कारण हुन सक्छ। एक अध्ययनले देखाएको छ कि 49 याहाम्बेन प्रोडक्टहरुमा जो केवल दुई अध्ययन गरिएको थियो ले लेबलमा सही जानकारी प्रदान गर्यो। पूरक 0-12.1mg को योहोम्बेइन थियो, तर केवल 5.4 मिलीग्रामको एक खुराक सिफारिश गरिएको छ।
गलत मात्राहरु सूचीबद्ध उत्पादनहरु को वास्तविक खुराक योहोम्बेन को राशि को 23% -147% ले भन्यो कि उनि भन्छन्। यसबाट आउँछ हानि यो हो कि तपाईले भन्दा भन्दा बढी खुसी खुम्च्याउनु पर्दछ र यसले तपाईंलाई हानिकारक साइड इफेक्टबाट ग्रस्त हुन सक्दछ।
Yohimbine खतराहरूबाट आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस्, यो सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाईंले पूरै ब्रान्डबाट ब्रान्डहरू किन्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईं भरोसा गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, उत्पादन र सुरक्षाको लागि परीक्षण गरिएको उत्पादनको लागि जानुहोस्।
Yohimbine साइड इफेक्ट
सामान्यतया, कुनै पनि अनुपयुक्त संग, त्यहाँ साइड इफेक्टहरू छन्। यहाम्बेन साइड इफेक्टहरू तीव्र वा हल्का हुन्छन्। ती व्यक्तिहरू प्रायः रिपोर्ट गरिएका छन् उच्च रक्तचाप, चिन्ता, हृदय बढेको दर र जस्ट्रोटिस्टिनल कष्ट हो। दुर्लभ साइड इफेक्ट तीव्र गुर्दे चोट, पर्दा, र हृदयघात समावेश गर्दछ।
तथापि, तपाईलाई ध्यान दिनुहोस् कि यो साइड इफेक्ट यहाइम्बे सँगै एकसाथ सम्बन्धित अन्य सामग्री समावेश गर्ने परिणामको रूपमा थियो र यसैले उनीहरूले प्रभावलाई पनि योगदान दिन सक्थे। Sarm RAD140 (टेस्टोलोन) प्रयोगकर्ताले भने: समीक्षाहरू, चरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्, जोखिमहरू
योहोम्बेइन सबै भन्दा सुरक्षित पूरक मध्ये एक छ तर केहि संभावित खतरनाकहरू जस्तै गम्भीर प्रभाव र गलत उत्पाद लेबलिंग जस्तो हुन्छ।
Yohimbine प्रयोगकर्ता समीक्षा
यहाम्बेन फाइदाले पेपरमा धेरै राम्रो आवाज उठाउन सक्छ, तर तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ यदि यो काम गर्दछ। यहाँ केहि योहोम्बेन समीक्षाहरू छन् जुन हामीले हाम्रो ग्राहकहरु बाट प्राप्त गरेका छौ।
रे भन्छन् `भावनात्मक खानेकुरा हुनु, मैले वजनको साथ संघर्ष गरेको छु। अलग डाइट्स र सानस को लागी पूरकबाट। खानेपानीको सन्दर्भमा ठूलो व्यक्तिबाट मलाई मदत खोज्न थाल्नुभयो, र सौभाग्य देखि, मलाई मद्दत भयो। मैले पहिले नै प्राप्त गरेको वजनको बारेमा के हो? मलाई यो कल जस्तै हराउनु आवश्यक छ किनभने मेरो लुगाहरू मलाई राम्रो लाग्यो। मैले योहोम्बाइनलाई काम गरेर बाहिर संयोजन गरिरहेको छु, र म आफैंमा हेर्न सक्ने सबै राम्रो चीजहरू सूचीबद्ध गर्न सक्दिन। म 130 lbs बाट सबै तरिका 178 lbs बाट आएको छु। म कसैलाई सल्लाह दिनेछु जो योहोम्बेन प्रयास गर्न केहि वजन बहाउन चाहन्छु। '
यु यान भन्छिन्, `मैले मेरो पतिको लागि इन्टरनेटमा यसको फायदा पढ्न पछि जन्मदिनको रूपमा यो उत्पादन किन्नुभयो। उनको ऊर्जा स्तर र सहनशीलता नाटकीय रूप देखि बिस्तर मा बाहिर र बाहिर छ। आश्चर्यजनक रूपमा उहाँको हाइपरटेन्सन पनि कम भएको छ। उनले मलाई धन्यवाद चढाउँछन् किनकि गत तीन महिनाको लागि हाम्रो प्रेम जीवन 20 वर्ष पहिले भएको थियो जहाँ फर्कन्छ। म यो सबैलाई सिफारिस गर्नेछु। '
Fad भन्छ, 'कहिल्यै नदेखाउनुहोस् जस्तै यो पूरै पूरै तपाईले पैसा गुमाउनु भएको छ। पहिलोमा, मैले त्यहि महसुस गरेँ किनकि मैले यो प्रयोग गरिसकेपछि अब फरक फरक छ। मैले मेरो 40s पाएको बेला मैले पहिलो पटक ड्राइभमा वृद्धि गरेको छु। मैले प्रयोगको पहिलो हप्ता पछि फरक फरक महसुस गरें, र मेरो लिबिया अहिले चोटीमा छ। म के थप सोध्न सक्छु? धन्यवाद योहोम्बेन। '
वांग भन्छ, `मैले कहिलेकाहीं एक बच्चा बेच्ने आशा आशा गरेको छु। गत आठ वर्षको लागि, मैले धेरै गर्भमा विशेषज्ञहरु भ्रमण गरेको छु जुन अन्तिम एक जना योहोम्बेनले मलाई सम्म पुर्यायो। मैले सँधै साथीहरूलाई ईर्ष्या गरे जुन उनीहरुका छोराछोरीलाई हेर्नको लागी घर गए। म बच्चाहरु संग कुकुर र हँसिलो छुट्यो, र म लगभग डिप्रेसनमा परेका थिए। योहोम्बिनले मेरो जीवनलाई चमक पारेको छ, र म मेरो छोरीको लागि केहि पनि व्यापार गर्न सक्दैन। म अहिले बुबा हुँ र मेरो विवाहको जीवन धेरैको ईर्ष्या हो। म यो चमत्कार पूरै आठ वर्ष पहिलेको बारेमा थाहा थियो। यो हरेक पैसाको लायक छ। '
डा। خالد भन्छन्, `म रोगबिमारबाट ग्रस्त मेरा अधिकांश बिरामीहरूलाई योहिम्बाइन सप्लीमेन्टहरू प्रयोग गर्न भनिरहेको छु, र यसले उनीहरूलाई निराश तुल्याएको छैन। जो कोही उहीको लागि सिंथेटिक औषधि प्रयोग गरेर थकित छन् को लागी योहिम्बे प्राकृतिक हो र यसको दुष्प्रभाव हल्का छन् भन्ने तथ्यलाई कदर गर्दछ। थप रूपमा, तिनीहरू स्वास्थ्य लाभहरूले भरिएका छन् र यसैले, तपाईंको शरीरको चारैतिर उपयोगी हुनेछन्। '
यान भन्छ, `म यस बारे धेरै उत्साहित छु योहाम्बेन हेबै किनकि यो अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो वजन घटाने उत्पादन हो जुन मैले कहिल्यै लिइनँ। सबैलाई एक पाउन्ड सफा गर्ने र प्राकृतिक तरिकाले थप पाउन्ड बहाइदिनु पर्दछ।
बेकी भन्छ, `यस हप्ताको लागि मेरो पति यस पूरैमा भएको छ, र शब्द शानदार मात्र एक विस्मरणीय हो। म 35 हुँ र मायालु पतिसँग विवाहित छु, तर समस्या भनेको काम हो र बच्चाहरूले उनको राम्रो भाग लिइसकेका छन्। उहाँ अब मूडमा पुग्नुहुन्न, र यदि उसले गर्छ भने, यो लामो समयसम्म हुँदैन। यसले अन्तरवार्ता प्राप्त गर्नु अघि यो लिन्छ र यसले काम गरेको छ। म लगभग देउदै थिएँ, तर यो एकदम धेरै सहयोगी भएको छ। हामी अब हामी आफैलाई आनन्दित हुन सक्छौं। मलाई थाहा छ कि त्यो दोहोरो ग्राहक हुनेछ। '
यहाम्बेन बिक्रीको लागि पूरक
सायद सबैले जीवनमा एक पटक एक वा बढी पूरक प्रयोग गर्दछ। चाहे यो वजन घटाने को लागी हो, मांसपेशिहरु मा वृद्धि या कुनै अन्य जो कि जीवन को गुणवत्ता मा सुधार गर्दछ। तथापि धेरैले स्वीकार्नेछन् कि सबै पूरकहरू प्रभावकारी छैनन् र तपाईले पूरक किन्नको लागि तल जान्छ? केहि बेकार कोणहरु हुन सक्छ जुन तपाईंको शरीरलाई कुनै पनि तरिकामा लाभ पुऱ्याउँदैन। आजको बजारमा, धेरै आपूर्तिकर्ताहरूले अझै म्याद समाप्त भएको वा खतरनाक नकली पूरक बिक्री गर्दछन्। नक्कली पूरकहरू वास्तविक उत्पादनको रूपमा माछाहरू छन्, र तपाईं केवल डुबाइ प्राप्त गर्न केवल झूटको लागि गिरिनेछ। केहि हुन सक्छ केवल नकली हुन सक्छ तर सक्रिय संघको अप्रभावी रकम हुन सक्छ। अझ पनि खराब केहि पनि हुन सक्दछ।
यही कारणले तपाईंको पूरकको लागि सही बिक्रेता खोज्न धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईले फ्याँकिने छैन। एक वैध बिक्रेता वा निर्माताले गुणस्तर, मूल्य वा प्रभावकारितामा कुनै पनि प्रश्न वा चिन्ताहरूको लागि सधैँ धेरै उत्तरदायी छ। उत्पादनको बारेमा कुनै पनि अपरिचित, अस्पष्ट वा अवास्तविक उत्तर तपाईंले पूरक किन्नका लागि योजना बनाउँदा रातो झण्डाको रूपमा कार्य गर्नु पर्छ। सौभाग्य देखि तपाईं को लागि, हामी मूल्य, आउटपुट, र गुणस्तरको जब आउँदा उत्तम पूरक प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछौं।
Phcoker.com मा तपाइँ सजिलै संग गर्न सक्नुहुनेछ Yohimbine खरीद गर्नुहोस् एक उचित मूल्य मा अनलाइन र यसलाई आफ्नो स्थान मा वितरित। तपाईलाई योहोम्बेन किन्नको लागि सोच्न चाहानुहुन्छ; हामी यो सुनिश्चित गर्दछौं कि तपाइँ खरीद प्रक्रियाको आनन्द उठाउनुहुन्छ र तपाईले आदेश दिएका लागि ठीक पाउनु हुन्छ। त्यसोभए तपाई हामीबाट कसरी खरीद गर्नुहुन्छ?
यहाँ अनलाइन खरिदका चरणहरू छन्:
Phcoker.com वेबसाइटमा जानुहोस्
"योहोम्बिन (एक्सएनएक्सएक्स- एक्सएनक्स-एक्सएनक्स)" खोज्नुहोस्
खरिदका लागि अनुप्रयोग फारम भर्नुहोस् र पेश गर्नुहोस्
तपाईंलाई अनुरोध गरिएको हुन सक्छ कि एक सानो मेडिकल सर्भर भर्न सकेन; भर्नुहोस् र पेश गर्नुहोस्। हाम्रो विशेषज्ञले समीक्षा र सम्भवतः तपाईंको अर्डर स्वीकृत गर्नेछ।
एकपटक तपाईंको अर्डर अनुमोदित भएपछि, तपाइँ उत्पादनको लागि तिर्नु हुनेछ र त्यसपछि यसलाई प्रदान गर्नको लागि Phcoker.com को प्रतीक्षा गर्नुहोस्।
आज हामीलाई अर्डर गर्नुहोस् र यहाम्बेन सेक्स ड्राइभ, वजन घटाने, र यो सबैको साथमा आउने सबै फाइदाहरूको मजा लिनका लागि खुराकहरू लिनुहोस्।